Orinasa mivaingana vahaolana amin'ny dosie | Mpanamboatra sy mpamatsy vahaolana amin'ny solika China
Z andiana Capsule Fenitra milina
Ny masinina famenoana kapsily Z dia natao manokana ho an'ny famenoana zava-mahadomelina ny kapsily mafy, ary misy modely isan-karazany amin'ny milina. Izy io dia be mpampiasa amin'ny famenoana karazana zava-mahadomelina noho ny tanjona maro, asa tonga lafatra, fampisehoana azo antoka ary famenoana marina. Izy io dia manana endrika tsy manam-paharoa ary afaka mameno ny famenoana fanafody isan-karazany amin'ny kapsily iray ihany.
Masinina fanaovan-gazety S Series Tablet
Ny milina fanoratana tablette S dia natao hanomezana vahaolana mahomby amin'ny takelaka mifototra amin'ny filan'ny mpampiasa. Ny fahamendrehany sy ny fahamendrehany dia ekena amin'ny indostria, ary ny asany mora, ny fifehezana malefaka ary ny automatisation dia deraina be. Mandritra izany fotoana izany dia afaka manome takelaka takelaka roa sosona sy vahaolana takelaka mahomby izy io, manome safidy ho an'ny mpampiasa takelaka fanindriana takelaka maro samihafa.
G Series Fitaovana firakotra
Ny milina fandefasana andiany G dia afaka manodina ny endrika rehetra sy ny haben'ny vokatra, ary izy io no fitaovana mety indrindra amin'ny firakotra sarimihetsika takelaka, sarimihetsika takelaka takelaka bitika, firakotra siramamy, firakotra pelety ary layering. Ny rafitra fanamainana patanty dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fanamainana sy ny kalitaon'ny vokatra.
P Series Fitaovana firakotra matevina
P series perforated coating machine dia vokatra manerantany izay mandray ny haitao farany manarona. Izy io dia manambatra ny tombotsoan'ny milina fanosotra rehetra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ankehitriny ary mahafeno ny fepetra farany takiana amin'ny indostrian'ny fanafody ho an'ny fanokanana sy fanadiovana ny masinina, izay mety hahatratra ny famokarana mitoka-monina tanteraka, hampihena ny fiparitahan'ny akora mavitrika ary hampiakarana ny fiarovana ny fiarovana an'ireo mpandraharaha.
Ny granulator maina dia karazana fitaovana fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ny fampiasam-bola ambany, fahombiazana avo lenta, fitsitsiana angovo ary tsy misy loto. Ny dingan'ny fametahana, famolavolana, fanorotoroana ary fametahana vongan-tany maina amin'ny alàlan'ny fitrandrahana mekanika dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fampiasana rano kristaly amin'ilay fitaovana mihitsy.
HLSG Series Granualator mando
LGL Series Fanamainana fandriana fluid
fanamainana fandriana tsiranoka azo ovaina haingana sy misaraka, izay afaka mifanaraka tsara GMP takiana. Fanamainana fandriana fluid hatramin'ny 12 bar, mifanaraka amin'ny ATEX, dia azo omena arakaraka ny fepetra takian'ny mpampiasa.